Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Sok Socheat, mpikatroka ho an’ny fiteny Bunong · Global Voices teny Malagasy
Fanontaniana&Valiny: Fantaro i Sok Socheat, mpikatroka ho an'ny fiteny Bunong
Sok no hitantana ny kaonty @AsiaLangsOnline ny 17-23 Jona 2020
MpanoratraLaila Le Guen
Voadika ny 16 Jona 2020 2:12 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Italiano, Português, Ελληνικά, English
Sok Socheat, mpikatroka ho an'ny fiteny Bunong. Sary natolotr'i Sok Socheat / CICO.
Taorian'ny fanentanana nahitam-pahombiazana tamin'ny taona lasa tety anaty media sôsialy nentina nankalaza ny fahamaroam-piteny an-tserasera manerana an'i Azia, hitohy mandritra ny 2020 ny tetikasa ifandrimbonana. Isankerinandro dia hisy hifandimby hitantana ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline ireo mpikatroka sy mpanandrateny samihafa ho an'ny fiteny, hizara ny zava-niainany, ny fanao tsara indrindra, ary ireo lesona azon’-dry zareo tamin'ny famelomana aina indray sy fampahafantarana ireo fiteny teratany, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'izay anjara toerana raisin'ny aterineto. Ity fanentanana ity dia fiarahana miasa eo amin'ny Rising Voices, ny Digital Empowerment Foundation, ary ny O Foundation.
Isankerinandro, ireo vahiny mpampiantrano ho avy eo dia hamaly fanontaniana maromaro momba ny làlana nodiaviny sy hanome topimaso fohy momba ny fitenin-dry zareo. Ity ny Fanontaniana sy Valiny niarahana tamin'i Sok Socheat (@cico_ip) izay hanome topimaso momba izay horesahany mandritra ny herinandro maha-mpampiantrano azy.
Sok Socheat (SS): Ny fiteny teratany antsoina hoe Bunong no fiteniko, izay tsy mbola manana rafitra entina manoratra azy. Afaka mampiasa ny endri-tsoratra khmer izahay mba hanoratana ny fiteninay, na dia tsy mbola miparitaka be aza izy.
Mpikambana ao amin'ny Cambodia of Indigenous People Culture Care’s Organization (CICO) – Fikambanana miaro ny kolontsain'ireo vahoaka teratany ao Kambodza – aho, fikambanana iray manandratra sy mandrisika ny fanajàna zon'olombelona, indrindra fa ny an'ireo vahoaka teratany manerana an'i Kambodza. Amin'izao fotoana izao izahay dia miasa aminà tetikasa iray antsoina hoe “Feon'ireo Vahoaka Teratany manana Fahasembanana“, ka amin'ny alàlany dia afaka ataon'ireo olona 25 teratany manana fahasembanana, avy aminà vondrompiarahamonina telo samihafa, ny maneho hevitra, ny mangataka fiarovana ny zon'izy ireo, ny mikatsaka torohevitra momba ny lalàna isaky ny misy fanararaotana ny zon'izy ireo. Mampiasa fiteny roa ry zareo (ny tenindreniny sy ny Khmer) mba hanentanana momba ireo fomba firoso araka ny lalàna sy ny fiarovana ny zon'ireo olona manana fahasembanana.
RV: Ahoana ny toerana misy ny fiteninareo ety anaty sy ivelan'ny aterineto?
SS: Ny Khmer sy ny Anglisy no teny fototra fampiasa hifandraisana, ary indraindray ny Bunong, miankina amin'ny fotoana sy ny tanjon'ny vondrona. Misy olona vitsivitsy avy amin'ny vondrompiarahamonina misy ahy manandrana ny mandefa lahatsoratra amin'ny tenindreninay ety anaty aterineto.
Amin'ny fifampiresahana andavanandro ao anivon'ny vondrompiarahamonina (any amin'ny faritra ambanivohitra), mbola ny Bunong no ifandraisanay saingy ireo miaina any an-tanandrehibe kosa dia nampitsahatra ny fampiasàna ny fiteniny, satria tsy sahin-dry zareo ny hiteny azy io.
RV: Mikasika lohahevitra inona no kasainao hifantohana mandritra ny herinandro izay hitantananao ny kaonty Twitter @AsiaLangsOnline?
SS: Hifantohako ny fironana ara-pivavahan'ireo vitsy an'isa satria io dia zavamisy iray manjo ny ankamaroan'ireo vahoaka teratany, indrindra fa ireo miaina miaraka amin'ny fahasembanana.
RV: Inona no tena antony manosika anao ho amin'ny fikatrohana an-tserasera ho an'ny fiteninao? Inona no fanantenanao sy nofinofinao ho an'ny fiteninao?
SS: Ny tena anatony manosika ny CICO handray anjara amin'ny fanentanana ny kaonty Twitter amin'ity herinandro ity dia ny hetaheta hizara amin'izao tontolo izao ny atao hoe Bunong sy hampiseho ny lanjan'io kolontsaina sy fiteny teratany io ho an'ny tontolo ivelany. Antenaiko fa tsy ho ela dia ho eken'izao tontolo izao ny fiteniko.